5 Siyaabood Oo Go'aan Looga Gaaro Qofaad Jeceshahay Balse Si Xun Kuu Dhaawacay - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»5 Siyaabood Oo Go’aan Looga Gaaro Qofaad Jeceshahay Balse Si Xun Kuu Dhaawacay
Aayaha editor Send an email December 3, 2018
Way adagtahay inaad ka samirto qof micno weyn kuugu fadhiya oo qiimo agtaada kulahaa xittaa marka uu ku dhaawaco kadib.
Waa kuwaan 5 talo oo kaa caawin doona inaad qofkaas ka samirtid kadib dhaawacyo xun uu kuu geystay.
1. Waqti sii naftaada
Ka tagista qof micno weyn agtaada kuleh balse ku dhaawaca waxay noqon kartaa mid adag balse xaqiiqda ayaa ah inay sahlanaan doonto. Haku deg degin xiriir cusub sababtoo ah dhab haddii laga hadlo uma baahnid. Waxa kaliya ee aad u baahantahay ayaa ah waqti aad boogta iskaga dhaydo.
2. Ogoow sababta uu xiriirka u dhamaaday
Waa inaad ogaataa sababta xiriirka u dhamaaday ama aad uga tagtay nin hore oo six un kuula dhaqmay.
Markaad fahamto sababta uu xiriirka u dhamaaday, way kuu sahlantahay inaad nafsadaada u cadeysid sababta aad ugu baahatay inaad ka tagto ama aad iskaga jartay.
3. Waqti la qaado saaxiibada
Waqti la qaadashada saaxiibada waxay kaa caawin doontaa inaad ka gudubtid xanuunka. Sameey waqti aad saaxiibadaa la qaadato oo waqtigaas farxadda leh la wadaag. Iska ilaali kalinimo iyo inaad ka fekertid waqtiyadii wanaagsanaa ee aad wadaagteen; haddii kale taas aad ayay kuusii dhaawaceysaa.
4. Dad cusub la kulan
Intaad cidlo joogi lahayd oo aad ka fekeri lahayd ninkii hore ee sida xun kuu dhaawacay, dalxiis iyo damaashaad u bax oo la kulan dad cusub. Sameeyso saaxiibo cusub oo anshax ahaan wanaagsan oo dhowr sharaftaada gabaryahay. Waxaa macquul ah inaad saaxiibadaas ka hesho midka kugu habboon ee mustaqbalka kula wadaagi lahaa.
5. Kafiirso qaladaadka xiriirkii hore
Haddii aadan ka fiirsan qaladaadkii hore, qalad kii lamid ah ayaad sameynee ama uu kugu sameynaa qofka xiga ee aad la kulanto. Iska hagaaji qeybtaada u baahan in laga shaqeeyo oo iska ilaali qaladaadka halista ah waana inaad ka fiirsataa lamaanka aad guursanee.
6 Faa'ido Oo Cajiib Ah Uu Leeyahay Xiriirka Ixtiraamka Ku Dhisan
6 Sababood oo Gabadha ay uga tagto ninka ay jeceshahay (Qodobadaan ayaa sabab u ah)
5 Sababood Oo Gabdhaha Badankood Ay U Nacaan Ragga Noocaan Ah
Lixdaan Arrimood Ka Feker Kahor Intaadan Guursan Xaas Labaad
Afar Sirood Oo U Qarsoon Lamaanayaasha Farxadda Ku Heysto Guurkooda
Daawo Qisada Cajiibka Ah Ee Laga Sameeyay Heesta (Xabiibi Makuu Ilmeeyaa)